Famerenana ny Stylus Creative Intuos nataon'i Wacom, pensilihazo nomerika ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Fotoana vitsy lasa izay dia nilaza taminay momba ny pen nomerika Wacom vaovao izahay, ny Intuos Creative Stylus, ary ny fampidirana mampiavaka azy: ny fifandraisana Bluetooth 4.0, ny bokotra ara-batana miaraka amin'ireo fiasa haingana sy ny fahaizana mamantatra hatramin'ny 2048 ny haavon'ny tsindry samihafaHo fanampin'ny fiasa "fandavana palma" izay manakana ny fametrahanao ny tananao eo amin'ny efijery an'ny iPad anao rehefa olana ny manoratra. Tao amin'ny Actualidad iPad dia afaka nanandrana santionany santionany izahay ary afaka manamafy fa manome izay ampanantenainy.
Ny stylus Wacom vaovao dia tonga amina boaty mitondra plastika mety, miaraka amin'ny bateria AAAA sy ny solo-pamoahana roa. Ny haben'ny stylus dia tsy lehibe noho ny ankamaroan'ny stylus mahazatra, ary mahazo aina tsara ny mitantana azyNa dia marina aza fa mandra-pahaizanao azy dia mety hanelingelina ny bokotra ara-batana raha tsindrio azy ireo tsy nahy izy io, saingy zavatra iray voavaha ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fampiasana pensilihazo.
Ny pensilihazo dia misy fifandraisana Bluetooth 4.0, izay ny hatsarany sy ny kilemany. Ity karazana fifandraisana ity dia tsy voatery ampifandraisina amin'ny fitaovana, fa ampifandraisina mivantana avy amin'ilay application. Fa miaraka amin'izay dia midika izany fa azo ampiasaina amin'ny fampiharana mifanentana ihany izy io. Na dia fitaovana fanampiny Wacom aza dia tsy ho olana ny fampifanarahana fampiharana. raha ny marina dia efa misy maromaro ao amin'ny App Store.
Ary maninona ny penina no mila fifandraisana Bluetooth? Eny, tsy hoe mandeha fotsiny ny bokotra ara-batana, fa koa miankina amin'ny tsindry ataontsika rehefa manoratra na manao sary, dia malemy kokoa na mahery vaika kokoa ny kapoka. Tsy misy intsony ny tsipika matevina noho ny tendron'ny fingotra goavambe. Miaraka amin'ny Intuos Creative Stylus dia voafehinao ny hateviny.
Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny mahita ny fomba fiasany mivelona, ​​noho izany dia avelanay ianao miaraka amin'ny horonan-tsary iray ahafahanao mahita ireo fiasa ireo amin'ny alàlan'ny stylus amin'ny iPad Mini. Ny vidin'ny Stylus dia 99,90 euros, ary tsy mifanaraka amin'ny iPad 3, 4 ary Mini (ary taty aoriana) ihany izy io, noho ny fifandraisana Bluetooth 4.0. Afaka mahita izany amin'ny tranokala Wacom ofisialy ianao izao.
Fanazavana fanampiny - Wacom dia manolotra ny Intuos Creative Stylus, penina nomerika marefo amin'ny tsindry
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Famerenana ny Intuos Creative Stylus nataon'i Wacom, pensilihazo nomerika ho an'ny iPad